आज वेब जीआईएस लागू गर्ने धेरै सम्भावनाहरू - जिओफुमाडास
अगस्त, 2017 ArcGIS-ESRI, कार्टोग्राफी, जियोस्पाटियल - जीआईएस
आजको टिप्पणीको विषय हो वेब जीआईएस। 'अप्रत्यक्ष' को लागी, यो केवल "वेबमा GIS" को रूपमा अनुवाद गरिएको हुन सक्छ, तर के यो वास्तवमा मतलब छ? यसको दायरा के हो? किन यस पोष्टको शीर्षकमा उल्लिखित 'अनुप्रयोगको धेरै सम्भावनाहरू छन्'?
त्यहाँ एरिक वान रीज द्वारा पाँच कारणहरू छन् लेख, (GIS अवधारणा) लाई देखाउन को लागी कि वेब जीआईएस वर्तमान मा 'पुराना स्कूल' जीआईएस अवधारणा को विकास हो; र, यसबाहेक, यो परिवर्तन समावेश छ विविधताहरू न केवल को रूप मा कसरी जीआईएस को काम गर्न को लागी तर यो भौगोलिकतात्मक प्रौद्योगिकी को उपयोग को पूरक गर्न को लागी यो आवश्यकता को आवश्यकता हो।
यो वैध वैध हुनेछ कि हामी यस विषयमा अपडेट गरौं भने, हामी हामी सोच्दछौं, हामी जान्दछौ वा हामी आफुलाई आफुलाई प्रोजेक्ट गर्न सक्दछौं भविष्य को रूप मा जीआईएस वेब को।
GIS कार्टोग्राफी भन्दा बढी छ, लेखकले प्रारम्भिक रूपमा पछाडि राखेको छ, पछि पछि "यो नक्सा अब कार्यको अन्तिम उद्देश्य होइन, तर यो पछि र विस्तृत विश्लेषणको सुरुवात बिन्दु हुन सक्छ"। नक्साको यो अवधारणा 'पिक्चरको भाग' को रूपमा एक परियोजनालाई विकास गर्ने आधारमा आधारित छ जुन जीआईएसले थप कामको लागि उपकरण हुनेछ। कस्तो प्रकारका परियोजनाहरू? जाहिराबाद, विभिन्न र वर्ष पहिले असीमित क्षेत्रहरु बाट हामी पछि उल्लेख गर्नेछौं।
र यो यो हो कि जीआईएस निश्चित रूपले ती टाढा late० को दशक पछि जब यसले प्रकाश देख्यो देखि प्रमुख लीगमा प्रवेश गरेको छ। प्रत्येक नयाँ दशकको साथ परिवर्तनले समात्यो: ज्ञानको "कहाँ यो छ के", केवल वर्णनात्मक; जान्न को लागी "के र किन "एक दृष्टिकोण जसमा केहि स्पष्ट वा स्पष्टता संग निर्धारित छ वा परिभाषित गरिएको छ, जो पुरा तरिकाले नयाँ भू-स्थानिय औजार र अवधारणाहरु को लागि एक मंच सेट गर्दछ।
GIS ले अब 'सहयोग' चाहिन्छ। यस विकासवादी परिवर्तनमा, लेखकले पुन: लेखेको छ, व्यक्तिगत कार्य उत्प्रेरित गरिएको छ। तर यो बिन्दुमा रोक्न लायक हुनेछ किनभने उनी भन्छन् कि जीआईएस डेस्कको 'पुरानो पुरानो' या 'कुशल चित्रकार' वा 'GIS विश्लेषक' आवश्यक थियो। यसले पहिले नै हामिलाई निम्न पोस्टको बारेमा छलफलमा धागे दिन्छ जुन टिप्पणी गर्नका लागि सर्वेक्षण र GIS मा कार्य गर्दछ। यो यहाँ दिलचस्प हुनेछ (सोध्नुहोस् केवल एक अग्रिमको रूपमा) जीआईएस को विकास को दशकहरु मा हामी वर्तमान मा हाम्रो प्रत्येक देश मा काम गर्दै छन्... म यसलाई अझ छोडिदिन्छु किनकि हामी मुख्य विषयबाट अलग रहन्छौं।
भ्यान रिज भन्छिन् "आज, जीआईएस कार्यकर्ताहरूले चार्ज गर्नुहुँदा अन्य GIS प्रयोगकर्ताहरूसँग सहयोग गर्न आवश्यक छ एक साथ कार्टोग्राफिक परियोजनाहरु "। यहाँ हामी 'एकता' शब्द हाइलाइट गर्दछौं। यस प्रकारको 'बहु-कार्य गर्ने' स्तर परियोजना जसमा निश्चित रूपमा एक व्यक्ति होइन सक्छ (सशर्त नोट गर्नुहोस्) पूर्ण कार्य पूरा गर्नुहोस्। यो धेरै तार्किक छ। बस किनभने किन GIS को पारंपरिक उपयोग को सीमाहरु विस्तार गरिएको छ, विविध विषयों मा अधिक जानकारी आवश्यक छ। लेखक साम्राज्य हो: "यसले यसले देखाउँछ कि GIS टेक्नोलोजी उद्योग कम र कम अनन्य (आला भन्दा कम, यदि हामी यसलाई शाब्दिक रूपमा अनुवाद गर्छौं)।"
वर्तमान GIS समुदायहरूमा ध्यान केन्द्रित छ। यो नयाँ कथन पहिले नै व्यक्त गरिएको कुरासँग सम्बन्धित छ। सन्दर्भमा एकताबद्ध वातावरणमा सन्दर्भ गरिएको थियो जसमा फरक विषयवस्तुहरू र नयाँ वातावरणमा पनि परिदृश्यहरू छन् जसमा नयाँ उपकरण र अवधारणाहरू छन्। राम्रो, कति धेरै? लेखकले हामीलाई बताउँछ कि "अधिक र अधिक ज्योतिषीय प्रविधि उपलब्ध छ, यो हो असंभव बजारमा सबै उपकरणहरू सिकाउनुहोस् "र सल्लाह दिन्छ," यो राम्रो छ विशेषज्ञ र फोकस विषयवस्तु वा अनुप्रयोगहरूको सेटमा भाग समुदायमा तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। "
यो पनि यस्तै व्यावहारिक छ। थाहा छैन कि जानकारी निरन्तर अद्यावधिक हुन्छ, जुन हामी आज जान्छौं लगभग-लगभग अप्रचलित हुनेछ केही समय पछि, वास्तवमा, मिति बाहिर। यो स्थायी 'अपडेट' हो जुन प्रत्येक पेशेवरले 'क्यारियरमा' जारी राख्न चुनौतीको रूपमा लिनुपर्दछ। सूचना इन्टरनेटमा छ र हामीलाई समय र सायद न्यूरन्स चाहिन्छ आवश्यक सबै कुरा ढाक्नु। वास्तविकता यो हो कि हामी सक्दैनौं। यसैले हामी सहयोग पहल GitHub, GeoNet, GIS StackExchange र अन्य उपकरण जस्तै सहयोग गर्दछौं आर्कजीआईएस हब, जो अब हामी उल्लेख गर्दछौं, जबकि लेखकले सबै ESRI उत्पादनहरू भन्दा धेरैलाई इशारा गर्छ ... ठीक छ, ठिकै संदेह, हामी आफ्नो तर्क संग सहमत छौं।
प्रोग्रामिंग र जीआईएस अब अनावश्यक छ। हामी विश्लेषण को एक 'कोर' पोस्टुलेट को एक आउँछ। सम्भवतः हामीले शाब्दिक अनुवाद प्रयोग गर्नुपर्दछ 'कोहनी'(हामी पहिले नै हामी गइरहेका छौं जहाँ हामी गइरहेका छौं, सही?)। भ्यान रीसले टिप्पणी गरे कि, "प्रोग्रामिंग भाषाहरू बदल्नको लागि नभई भू-भौगोलिक टेक्नोलोजी विस्तार गर्नु हो", यो स्पष्ट छ कि हालको वेबमा 'नक्शा - जिओस्पाटियल विश्लेषण' बाट उफ्रिने कुनै अर्को तरीका छैन। बीचमा 'कुहिनो' बिना सेवा। र पहिलो ठाउँमा ऊ आर्कपाइको बारेमा कुरा गर्दछ, त्यसपछि आर्कजीआईएसका लागि नयाँ एपीआईको बारेमा, साइप्याइ स्ट्याक पास गर्दैमा उल्लेख गर्दछ ... लाइब्रेरीहरू र पाइथनमा आधारित प्याकेजहरू! (Pitoneros ... प्रस्तुत गर्नुहोस्!) र रेकर्डको लागि जुन हामीले पहिले नै टिप्पणी गर्यौं पायथन मा पढाई को प्राथमिकता को बारे मा.
तर, बिर्सनु हुँदैन, हामीलाई आवश्यक छ देखाउनुहोस् र साझा गर्नुहोस् हाम्रो जानकारी त्यसपछि तिनीहरू देखा पर्छन् बृहस्पति नोटबुक र प्याकेज प्रबन्धक Anaconda सहयोगी कार्यप्रवाह सुधार गर्न।
तर कसरी एक वेब विकासकर्ताले उसको लागि बुझ्ने तरिकामा GIS टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सक्दछ? उत्तर: वेब एपीआईहरू र प्रोग्रामिंग भाषाहरू मार्फत। त्यसैले जीआईएस समुदायले जाभास्क्रिप्ट, पाइथन र आर अपनाएको छ। त्यसोभए हामी संगै रहौं, र हामी कुन समुदायहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा मनमा राखौं।
डेस्कटप जीआईएस वेब GIS को भाग बन्यो। Google नक्सा 2005 वर्ष र हुनत गूगल एक allusion सुरु, लेखक सुझाव रूपमा, व्यावसायिक जियोस्पाटियल मा उपभोक्ता बजार थप केन्द्रित, तथाकथित "जीआईएस उद्योग" गुगल को काम अमूल्य पाठ सिक्न सक्छ।
अब, हामी "जीआईएस उद्योग" वा "जियोस्पाटियल उद्योग" रूपमा आफूलाई उल्लेख?, कुनै पनि क्षेत्र / स्थानिक जानकारी र नक्सा, प्रयोग डोमेन जियोस्पाटियल उद्योग को भाग हो भनेर भन्न सही हुन?
हो, वास्तवमा। हामी त्यसबेला कारहरू, जडिएको साइकल, युएभी, संवर्धित वास्तविकता, कि, ती सबै प्रविधिहरू जुन स्थानिक डाटा र नक्सा, दुवै आन्तरिक र पारंपरिक, तिनीहरूका डाटाको मुख्य स्रोतको रूपमा कुरा गरिरहेका छौं। केहि साँच्चिकै उत्साहजनक र प्रकट।
के सिक्यो? यो जियोस्पाटियल प्रविधि विकसित अनुमतिको प्रविधिहरू एकीकृत गर्न सकिएन भनेर सिके थियो। विशेष बादल, एक क्लाउड पूर्वाधार सबै परिणामस्वरूप ठूलो डेटा 'डाटा विज्ञान' र व्यापार बुद्धि, जीआईएस को प्रयोगका लागि inextricably जोडिएको छ कि को विश्लेषण प्रोग्रामिंग, मोबाइल प्रयोग स्थानीय। तपाईं एक वेब ब्राउजर मार्फत क्लाउडमा जीआईएस को घटक पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, र अजिङ्गर प्रयोग जियोस्पाटियल विश्लेषण प्रदर्शन, यसरी लेखक उदाहरण।
यो विश्लेषण थप छलफलको शुरुवात मात्र हो। Inkwell मा क्लाउडमा GIS छन्, तर भविष्यमा WebGIS भविष्यमा। त्यो 'स्मार्ट' भविष्य जहाँ WebGIS दैनिक जीवनमा धेरै स्मार्ट एकीकृत छ कि 'स्मार्ट शहरहरू' को भविष्यमा धेरैले पहिल्यै कल्पना गरेका छन् र जसतिर हामी भाग लिन तयार हुनुपर्छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो QGIS3को 27 परिवर्तनहरूको 2.18
अर्को पोस्ट नि: शुल्क उपलब्ध - UTM निर्देशांकहरू भौगोलिकमा रूपान्तरण गर्न टेम्पलेटअर्को »
एउटालाई जवाफ दिनुहोस् "आज वेब जीआईएस लागू गर्ने धेरै संभावनाहरू"
GISWeb (WebGis) मा उत्कृष्ट लेख, म यस मुद्दाको बारेमा धेरै विचारहरू साझा गर्दछु, विशेष गरी त्यस तथ्यसँग सम्बन्धित छ कि परम्परागत GIS को मुख्य उत्पादन धेरै वर्षदेखि स्थिर नक्शा थियो, र यो ग्लोबलाइज्ड समयमा, नक्सा अब तिनीहरू गतिशील छन् र सीमाविहीन, विभिन्न स्रोत र उत्पत्तिबाट, धेरै प्राविधिक जटिलता बिना, geodata को धेरै प्रकारका द्वारा खुवाइएको।